गण्डकी संसद जोगाउने भ्याक्सिन मै हुँ : दीपक मनाङे - ढोरपाटन पोष्ट
गण्डकी संसद जोगाउने भ्याक्सिन मै हुँ : दीपक मनाङे
२०७८ जेष्ठ २७, बिहीबार २१:३२
म मोज गर्न मन्त्री हुन आएको हैन । पृथ्वीसुब्बा मेरो अहिलेपनि दाइजस्तो हो ।
एमालेकै ३० प्रतिशतले मलाई तपाईंले जोगाउनु प¥यो भने । तलब होला, चुनाव जितेर आएकोले बजेट लगेर काम गरिरहेको होला । उहाँहरुले पहिलोपटक मलाई हामी जसरी पनि बहुमत पु¥याउँछौँ भनेको थियो । पुगेन । दोस्रो चोटी पनि यसो सोचेँ । मनाङ र लमजुङको राम्रो सम्बन्ध छ । मैले यसो सोचेँ, यस्तो तालले त भएन । मैले दोस्रो पटक सपथ लिएँ ।
जुन क्याविनेट इलिगल कुरा गर्छ, त्यस्तोमा जानै हुँदैन । म ७ बजेसम्म त मन्त्रालयमै थिएँ नि । मैले संसद बचाउने हो, केद्रको यो रोग प्रदेशमा आउँदैछ । कोरोनाभन्दा पनि ठूलो विमार हो । कोरोना के हो र ? भ्याक्सिन लगाए सकिन्छ यो बिमारको त भ्याक्सिन पनि छैन । भ्याक्सिन भनेको त राजीव गुरुङ रहेछ । डाइरेक्ट संसद भंग गर्छु भन्छ भने त्यो मान्छे पोलिटीसियन हैन ।
जो मान्छेलपे संसद भंग गर्छु भनेर डिजाइन गर्छ ,त्यो मान्छेले के आधारले विश्वासको मत लिने ? अनि त्यो मान्छेलाई विश्वासको मत दिन जाने ? दिने मान्छे पनि बेवकुफ हैन ? त्यहाँको २७ जनापनि हैन ,त्यहाँको ५ जनाले बाँडेर खाने हो । जतिपनि केपी ओलीको यहाँ छन्, २६ जना छन्, एकजना ईन्द्रलाल सापकोटा मात्र गर्न हुन्न भन्ने हो अर्का २६ जनालाई त एक भोट, एक भोट, हजार–सजार हैन, यी २६ मा पनि ५ जनालाई जिताइयो भने त डुबेर मरेपनि हुन्छ । यिनीहरुलाई त मुद्दा लगाउनुपर्छ ।
के मुद्दा लगाउने नयाँ सरकारले गर्ला । यिनीहरुले त एकमहिना तयारी गरेका हुन् । यिनीहरुलाई त मुद्दा नै लगाउनुपर्छ । जानिबुझी सरकार ढाल्नेलाई त कि देशद्रोह लगाउनुप¥यो कि प्रदेशद्रोही मुद्दा लगाउनुप¥यो । म त मनाङ जिल्लाको सांसद हो, म हरायो भनेर कसले निवदेन हालेको छ र मलाई धरपकड गर्ने ? आपको बोटमा आँप नै फल्छ । बोट केपी ओली भयो । फल यिनीहरु भयो । हामीले आँपको बोटमा अब्बा खोजिरहेका थियौँ । यस्तो कुरामा मुख्यमन्त्री बोल्नु पर्दैन ? आज जाने भएपछि अलिकति बोलिरहेको छ (मुख्यमन्त्री) ले खुलेर बोल्नुप¥यो नि ।
कोरोना महामारीले बढायो आर्युेवेद औषधिको महत्व